Shacabka Masaarida oo Siisi ku eedayay inuu masuul ka yahay shilkii tareenka ee ka dhacay Al-Qaahira. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Shacabka Masaarida oo Siisi ku eedayay inuu masuul ka yahay shilkii tareenka ee ka dhacay Al-Qaahira.
On Feb 28, 2019 751 0
Iyadoo maalintii shalay, shil tareen oo ka dhacay magaalada Al-Qaahira ee caasimadda wadanka Masar ay ku dhinteen kudhawaad 30 ruux, halka tiro intaas kabadanna ay ku dhaawacmeen, ayaa shacabka Masaarida waxay mas’uuliyadda dhacdadaas dusha kaga tureen madaxweynaha xukunka milatari ku qabsaday dalkaas ee Cabdil-fataax As-siisi.
Dadkan oo fakarkooda ku soo gudbinayay baraha bulshada ay kulanto ee Internetka ayaa sheegay in Siisi uu yahay qofka masuulka ka ah dadka ku le’dahay shilka tareen ee shalay ka dhacay Al-Qaahira, maadaama uu horay u diiday inuu dayactiro wadada ay Tareenadu isticmaalaan.
Dadka Masaarida ayaa is dhaafsanayay muuqaal laga duubay Cabdil-fataax As-siisi, madaxweynaha Afgembiga Masar, kaas oo uu ku diidayo miisaniyad dhaqaale oo gaareysa 57 milyan oo doollar, taas oo uu codsaday wasiirkii gaadiidka ee xilligaas, si loogu dayactiro wadooyinka Tareennada.
Markii uu shalay dhacay shilka tareenka ee ay ku dhinteen 28 ruux, kuna dhaawacmeen 40 kale, waxaa si deg deg ah isku casilay wasiirka gaadiidka ee dowladda Hishaam Carafaat.
Masar ayaa lagu tiriyaa wadamada ugu isticmaalka badan gaadiidka Tareenka, waxaana khadadka ay tareennadaas isticmaalaan laga dareemayaa burbur iyo dayac tir la’aan, iyadoona ay ugu wacantahay maamulka milliteriga ee ka jira dalkaas, kaas oo dhuunta qabtay shacabka Masar.